के घूसखोरी गराउँछ
व्यवस्था, आपराधिक व्यवस्था
घूसखोरी हुनेछ शायद सधैं थियो। घूसखोरी के हो? अपराधी कोड को यो एक अपराध रूपमा classifies। यो एक अपराध र एक misdemeanor छ। यो गम्भीर कुरा हो? हो, गम्भीर। धेरै घूसखोरी अहानिकारक कुरा जस्तो देखिन्छ। वास्तवमा यो त छैन। समाज यो कार्यमा कारण भएको क्षति ठूलो छ। बाट जनसंख्याको यो धेरै खण्डहरू ग्रस्त छ।
अपराधी कोड उनको गंभीर सजाय लागि प्रदान गर्दछ। र घूस के हो? वास्तवमा - यो कुनै पनि कार्य को प्रदर्शन लागि आधिकारिक प्रस्ताव छ जो केही अनौपचारिक भुक्तानी छ। तिनीहरूले यसरी प्रदर्शन गर्न उहाँलाई सोध्न? अनुरोध (उदाहरणका लागि, कसैले पहिलो स्थानमा कुनै पनि स्थिति को लागि एक उम्मेदवार विचार) पूर्ण अहानिकारक हुन सक्छ, तर पनि सरकारी कर्तव्य को उल्लंघन संग लिङ्क गर्न सकिन्छ।
भ्रष्टाचार को एक प्रकटीकरण - दिने राज्य कर्मचारी घूस। व्यावसायिक घूसखोरी - व्यावसायिक संरचना को घूस कर्मचारीहरु।
आज, थप र गाह्रो प्रकट गर्न यस्तो अपराध। कठिनाइको निरन्तर पैसा स्थानान्तरणका केही नयाँ तरिका देखा भन्ने तथ्यलाई देखि स्टेम। व्यक्तिगत बैठक आवश्यक छैन।
एक खोल कम्पनी खाता हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ लाभार्थीको खाता नातेदार रिश्वत हस्तान्तरण र यति मा छन् धन विद्युतीय वालेटमा वा बैंक खातामा प्राय पठाइएका छन्।
सम्म 2011 यस कार्यमा राम्रो द्वारा punishable लागि, राशि जो को घूस नै रकम बराबर थियो। आज, यो एक धेरै राम्रो भएको छ। यो भ्रष्टाचार समाज को एक ठूलो समस्या छ देखि, अचम्मको छैन। आपराधिक दायित्व पनि आपराधिक कोड बाहिर spelled। विशेष लेख मा 291. bribing पहिचान गर्न सकिन्छ मात्र सोह्र को उमेर भन्दा एक योग्य व्यक्ति द्वारा। एउटा सरकारी मात्र घरेलू, तर पनि विदेशी हुन सक्छ।
घरेलु साना घूस punishable छ:
- राम्रो, जो को राशि रिश्वत तीस पटक मात्रा अधिक हुन सक्छ;
- कैद। अवधि - दुई वर्ष। सजायको यो फारम अक्सर tenfold राम्रो साथ सँगै प्रबन्ध छ।
ठूलो रकम मा घूस दिने punishable छ:
- sorokakratnom आकार अधिकतम को राम्रो;
- कैद। अधिकतम अवधि - तीन वर्ष। एकै समयमा, नियम, एक व्यक्ति पन्ध्र पटक रकम दोकान छ।
अवैध कार्य वा कार्य गर्न विफलता प्रतिबद्ध छ एउटा सरकारी गर्न गरिएको थियो जो घूस, दिने punishable छ:
- ठीक, जो आकार रिश्वत shestidesyatikratnogo पुग्न सक्छ;
- कैद। अधिकतम अवधि - आठ वर्ष। यो दण्ड अप तीस-गुना आकार चाल हुन सक्छ।
वर्णन माथि साँच्चै भइरहेको छ के को नतिजा गणना सक्ने आधिकारिक, मात्र लागू हुन्छ।
घूस दिने व्यवस्था गरेर punishable छ:
- ठीक, जो को devyanostokratnogo आकार रिश्वत पुग्न सक्दैन आकार;
- अप गर्न बाह्र वर्ष को कैद। यस मामला मा यो घूस को semidesyatikratnoy रकम दोकान गर्न सकिन्छ।
जब briber पक्राउ गर्न सकिन्छ? एउटा सरकारी को ग्रहण मान कम्तिमा भाग - अपराध को अन्त्य। कार्य Consummated मान आफ्नो नातेदार वा साथीहरूको केही हुनेछ घटनाको छलफल गरिनेछ।
25 हजार rubles - एक पर्याप्त घूस, 150 हजार rubles - ठूलो आकार।
केही अवस्थामा मा, briber को खुलासा योगदान, वा कम से कम अपराध अनुसन्धान। यस मामला मा, यो सम्भव छ आपराधिक दायित्व बाट छुट। यसलाई आधिकारिक यी वा अन्य धम्की प्रयोग गरेर मौद्रिक क्षतिपूर्ति माग घटनाको सम्भव पनि छ (को घूस-दिनेलाई स्वेच्छाले अपराध गर्न स्वीकार गरेको प्रदान)।
रिश्वत कटेज अचाक्ली सजाय कुनै दुर्घटना हो। यस्तो उपाय आवश्यक छन्। प्रशाशनिक तन्त्र सिद्ध टाढा छ। यो काम प्राप्त लगभग असम्भव छ, तर कठिन उपाय राम्रो परिणाम दिन सक्छन्।
अपराधी अनुसन्धान सुरक्षा अधिकारी के गर्छ?
अपराधी कोड को लेख 232। संस्था वा ओडार वा narcotic लागूपदार्थ, psychotropic पदार्थ वा तिनीहरूको analogues को खपत लागि परिसर क्रमबद्घ प्रावधान को मर्मतका
एक ससर्त वाक्य के हो
Imre Kalman: जीवनी र रोचक तथ्य
बोर्ड विज्ञापन - यो बिना?!
जहाँ Novokuznetsk जाने: ठाँउहरु र चासो स्थानहरू
नयाँ वर्ष चरणमा कसरी आकर्षित गर्न
अद्वितीय घडी "ह्यूगो मालिक"
Usurpation शक्ति को गलत अनुचित छ
यो एक पानी पार्क गर्न गर्भवती महिला लागि सम्भव छ? आचार र सिफारिसहरू को नियम
"जस्तै" र "प्रेम" कस्तो भिन्नता छ? सम्बन्ध विकास
एक gametophyte (प्रजातिहरू, विशेषताहरू, विशेषताहरू) के हो?
गुथ्नु के हो? शुरुआती गुथना लागि मूल कुराहरु